मुलबासी न्युजका लागि पत्रकार तथा मंगोल युबा नेता जगत ठाडा मगर संगको छोटो संबाद - MONGOL KHABAR
मुलबासी न्युजका लागि पत्रकार तथा मंगोल युबा नेता जगत ठाडा मगर संगको छोटो संबाद
मुलबासी न्युजका लागि पत्रकार तथा मंगोल युबा नेता जगत ठाडा मगर संग मुलबासी न्युजका संचालक नरेन कुमार राईले लिएको संबाद । धरान
प्रश्न (१) तपाईं एउटा व्यावसायिक पत्रकारिता गर्ने ब्यक्ति कसरी MNO DGG संगठनमा आबद्ध हुनुभयो ?
- एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो धन्यबाद, मैले पत्रकारिता गर्दै थिए । त्यही क्रममा २०६९/०७० सालमा मैले गोपाल गुरुङ्द्वारा लिखित पुस्तक पढ्न अबसर पाए । त्यो पुस्तकमा कभर नभएको कारणले पुस्तकको नाम थाह थिएन । गोपाल गुरुङद्वारा लिखित पुस्तक पढेर झन मलाई मुलबासी मंगोलको अस्तित्व र मुक्तिको लागि झन लेखहरु लेख्दै जादा पुर्बको झापाबाट प्रकाशित एक अन्लाईनबाट हालको संगठन संचारबिभाग प्रमुख जीवन मंगोल संग सम्पर्क हुन अबसर मिल्यो । त्यतिबेला सम्म मैले डा.गोपाल गुरुङको मंगोल दर्शन, मंगोल अस्तित्व र मंगोल राष्ट्रबाद बुझिसकेका थिए । अब नेपालका मुलबासीको मुक्ति मंगोलले मात्र गर्छ भन्ने हिक्मत लिएर नवलपुरमा संगठन बिस्तारको अभियान चलाए । संगठन बिस्तारकै दिन मैले नेपाली राजनीतिमा अदेखा सचाइँ पुस्तक प्राप्त गरे, अध्यन गर्दै जादा थाह भयो कि मैले ०६९/०७० सालमा पढेको कभर नभएको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइँ रहेछ । त्यही पुस्तकको दर्शनले गर्दा मंगोल अभियानमा लाग्दै नवलपरासी जिल्लामा पहिलो मंगोल संगठन बिस्तार गर्ने अबसर पाए । म जिल्ला सचिब हुदा नवलपरासी र चितवनमा मंगोल ब्युँझाउने क्रम जारी राखे, हिजो नवलपरासीमा म एक्लै थिए आज नवलपरासीमा सयौंको संख्यामा मंगोल कार्यकर्ता जन्माए । यसरी नै म मंगोल अभियान्त, कार्यकर्ता हुँदै मंगोल संगठनमा आबद्ध भए ।
प्रश्न (२) नेपालको सिमा भारतले बारम्बार मिचिरहदा समेत यो सरकार किन लचिलो छ ?
- नेपाल एउटा मुलबासी मंगोलको देश हो । जहाँ बिदेशी हिन्दु आर्यहरुले शासन सत्ता चलाईरहेको छ । ती पनि युरोपको ककसिय, इरान, भारत हुँदै नेपाल प्रबेश गरि सरण लिई बसेका खस आर्यले चलाई रहेको छ । नेपाकका शासक सरकारले भारतलाई नेपाली भुभाग बेच्दै मंगोल भुमिमा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने रणनीति बाहुन क्षेत्रीको हो । यो पनि केही बर्षको लागि मात्र हो । यहाँको मंगोल अब ब्युँझिसकेको छ । भोलि यहाँको मुलबासीले आफ्नो देशको राज्यसत्ता एक दिन अबस्य खोस्छ भन्ने बाहुन क्षेत्रीलाई राम्रो ज्ञान छ । भोलि यहाँको मुलबासी मंगोलले बिगत देखि खस आर्यले गरेको दमनको प्रतिकार गर्न नसक्ने अबस्थामा काशी गएर बस्नु पर्छ । नेपालमा जति पनि बाहुन सरकार बन्छ । त्यो सरकारले नेपालका भुभाग बेचिरहन्छ । किन कि भोलि नेपालको बाहुन शासकहरु एक दिन नेपाल छोड्ने दिन आउदैछ । नेपाल छोड्न साथ काशि बाहेक अन्य मुलुकमा शरण पाउने छैन ।
प्रश्न (३) नक्सा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको र सिमा बिबाद द्विपक्षीय कुटनैटिक संवाद मार्फत समाधान गर्न सम्झदारी बिपरित रहेको बिषयलाई तपाईं के भन्नू हुन्छ ?
- कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भुभाग हो । यो बिबादित भुभाग होइन । यसलाई भारत सरकारले बिबाद बनाईदिएको मात्र हो । यसमा नेपालको ब्राह्मण शासकहरुको स्वार्थ लुकेको छ । सके सम्म यो बिबाद समाधान गर्न भारत र नेपाल सरकारले तुरुन्तै कुटनैतिक तबरबाट समाधान गर्नु पर्छ । भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको भन्ने झुटो बिबाद खडा गर्छ भने, नेपालले सुगौली सन्धीको कुरा उठाउनु पर्दछ । त्यो पनि अन्तराष्ट्रियकरण रुपमा सुगौली सन्धीको कुरा तत्काल नेपाल सरकारले उठाउनु पर्छ । सुगौली सन्धी अन्तराष्ट्रियकरण गरे प्रमाणको आधारमा नेपालको पक्षमा फैसला हुन्छ । भारत आफै कायापलत हुन्छ । भारतले अन्तरास्ट्रिय अदालतको आदेश मान्नु पर्छ । भारतले नेपाल प्रती हेपाह प्रवृत्तिबाट सम्झदारी बिपरित नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र बिबादित गरेको हो । यो राष्ट्रघाती हो । हामिलाई मान्य हुने छैन । भारत सरकार तुरुन्तै सच्चिनु पर्छ । अन्यथा नेपालले अर्को कदम चलाउन बाध्य हुनेछ ।
प्रश्न (४) MNO प्रेसिडेन्ट संगको तपाईले गरेको टेलिफोन संवाद एकदम चर्चित भएको थियो । अन्तमा डुब्लिकेट संवाद भन्ने MNO का नेता कार्यकर्ताले समाजिक संजाल ततायो । यसमा तपाईको भनाई के छ ?
- एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो खुशी पनि लाग्यो । मैले प्रष्ट पनि पार्नु पर्छ, यथार्थ र सत्य पनि हो । स्थानिय, प्रदेश र प्रतिनिधि निर्बाचन सम्पन्न पस्चात MNO ले चुनाबी समीक्षा बैठक काठमाडौमा डाक्यो । चुनाब अगाडि बुद्धलाल मेचे ज्युँले लोक्तन्त्र र समानुपातिक समाबेसी स्विकार्नेको नाममा समानुपातिक प्रणालीमा ३१.२ प्रतिशत खस आर्य स्विकारी ठूलो गल्ती गरि सक्नु भएको थियो । चुनाबी समीक्षा बैठकमा सच्चिनु हुन्छ होला भन्ने आशा म लगायत अन्य नेता कार्यकर्तालाई लागेको थियो । तर चुनाबी समीक्षा बैठकको नाममा चुनाबमा उम्मेद्बारी दिएकाहरुलाई नभैइ बहुमतको दम्भ देखाई आफैले गरेको गल्तिको ढाक छोप गर्न र आफू बच्नको लागि पहिलेनै केन्द्रिय सदस्यको बहुमत पुराई डा.गोपाल गुरुङको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्ने खेल खेलेको रहेछ । क्षणिकको लागि सफल पनि भयो । तर अहिले MNO लाई खाउ त दिन भरीको सिकार नखाउ त कान्छा बाउको अनुहार साबित भएको छ । बास्ताबमा चुनाबी समीक्षा बैठक नभैइ डा.गोपाल गुरुङको मंगोल दर्शन नै च्याप्टर क्लोज गर्ने समीक्षा बैठकले प्रमाणित गर्यो । चुनाबी समीक्षा बैठकमा उम्मेद्बारीहरुलाई उपस्थित गराउनु पर्थ्यो । तर त्यो भेलामा मेचेले बहुमत पुर्याउनको निम्ति कार्बाहीमा परेका र कहिले पनि लेबि नतिरेका केन्द्रिय सदस्यलाई समेत आफ्नो पक्षमा उपस्थित गराएका थिए । अन्तमा MNO मा समानुपातिकमा ३१.२ प्रतिशत खस आर्य स्विकारेर जाने भए पछि MNO मा रहेर मंगोल मुक्ति त परको कुरा गोपाल गुरुङले प्रतिपादन गर्नुभएको मंगोल सिद्धान्त पनि समाप्त गरे पछि, गोपाल गुरुङको सिद्धान्तलाई जोगाउन मुलबासी मंगोल अस्तित्व, मंगोल मुक्ति र मंगोल राष्ट्रबादको मार्गदर्शन जस्ताको तस्तै लिएर हिड्ने हाम्रो संगठनका संयोजक बिरलाल वालाहाङ ज्युँ हिम्मतको साथ अगाडि बढ्नु भयो र MNO DGG संगठनको स्थापना पनि भयो । हाल देश तथा बिदेशमा मुलबासी मंगोल मुक्तिको महान संगठन व्यापक बिस्तार हुदैछ । हामी कुनै पनि हालतमा गोपाल गुरुङले प्रतिपादन गर्नु भएको सिद्धान्तमा खस आर्य स्विकार्ने छैनौं । हाम्रो संगठन खस आर्य रहितको संगठन नै रहन्छ । जुन मेचे ज्युँ संग MNO DGG स्थापना नहुदै मैले पटक पटक MNO को प्रेसिडेन्ट बुद्ध लाल मेचे ज्युँ संग फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे । सम्पर्क हुन सकेन भेट्घाट त कुरै नगरौं । वहाँ त अहिले सम्म पनि हाम्रो प्रश्नको जबाफ दिन सक्नु भएको छैन । वहाँ संग मैले धेरै प्रयास पछि दुई पटक फोन सम्पर्क भयो । दुबै पटकको फोन संबादमा वहाँले लोक्तन्त्र मुल्यमान्यतालाई स्विकार्दै समानुपातिक पद्धतिमा खस आर्य स्विकार्ने पर्ने बाध्यता भयो । लोकतन्त्रमा आदिबासी जनजाति, दलित नस्विकारी संगठन दर्ता नहुने भयो । संगठन नै खारेज हुने संभावना भएकोले संगठन जोगाउन खस आर्य, आदिबासी जनजाति र दलित स्विकारेको म संग संबादमा स्विकार्नु भएको थियो । अन्तमा वहाँले खस आर्य नस्विकारी संगठन दर्ता गरेर देखाउनुस । तपाईहरु खस आर्य नस्विकारी अगाडि बढ्नु भएको छ, बढ्नुस सम्म भन्नू भयो । MNO को प्रेसिडेन्टबाट यस्तो मंगोल जनतालाई कुठारघाट हुने काम हुदा पनि मेचेको कार्यकर्ता के हेरिरहेकोछ ? नेतृत्वको गल्ती कार्यकर्ताले केलाउन सक्नु नै सच्चा गोपाल गुरुङको चेला हुन सक्छ । किन अझै सत्यको पक्षमा बोल्न सक्दैन ? मेचे ज्युँ त पद र पैसामा लम्पसारबादी भयो । वहाँको कार्यकर्ता किन गोपाल गुरुङको सिद्धान्तमा सिद्धान्तनिष्ठ हुन सकेन ?
बुद्ध लाल संगको संवाद भाइरल त भयो । तर मेचे पक्षका कार्यकर्ताहरुले सत्यता बाहिर आए पछि मंगोल जनतालाई भ्रम फैलाउनको निम्ति त्यो संवाद झुटो भन्ने प्रचार गरियो । सत्यता बुझ्न झुटो प्रचार गर्ने भन्दा वहाँको कार्यकर्ताहरुलाई एक पटक मेचे जयुं संग बुझ्ने पनि आग्रह गर्दछु । सत्यता के हो बुझ्न अझै पनि बुद्ध लाल मेचे र मेरो नम्बरको कल रेकर्ड नेपाल टेलिकममा सुरक्षित छ । नेपाल टेलिकमबाट निकालेर सुन्न र बुझ्न आग्रह गर्दछु । अझै पनि बुद्ध लाल मेचे र वहाँको कार्यकर्तालाई विनम्र अनुरोधको साथ भन्छु, सैद्धान्तिक बहसको लागि आउनुस । जगत ठाडा मगर सैद्धान्तिक बहस गर्न तयार छ । तर मंगोल जनतालाई झुक्क्याउने र भ्रममा पार्ने काम बन्द गर्नुस । MNO संगठन पुर्ण खस आर्य सहितको संगठन भैसक्यो । र अब बुद्ध लाल मेचे र वहाँको कार्यकर्तालाई मुलबासी मंगोल हौं भन्ने अधिकार पनि छैन । डा.गोपाल गुरुङको आत्माले पनि सराप्दै छन ।
प्रश्न (५) MNO DGG ले भारतको यस्तो मिचाह प्रबृत्तिलाई रोक्न कस्तो कदम चाल्दैछ ।
- यो बिषयमा गत हप्तामा तपाईको चर्चित मुलबासी न्युज मार्फत हाम्रो संगठनका शक्तिशाली अग्रज नेता शक्ति चाम्लिङ ज्युँले बताई सक्नु भएको छ । वहाँलाई सम्मान पनि गदर्छु । म सधै अग्रज नेतागणहरुको सम्मान गर्छु । सधै संगठनको बिधान र सिद्धान्तको नियम पालन गर्दछु । जुन बिचार हाम्रो अग्रज नेता ज्युँले राख्नु भएको छ । त्यही अनुरुप सगठनको निर्देशन र कदमलाई फ्लो गरि अगाडि बढ्ने छ ।